ကဗျာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 181
မောင်စိုးချိန်- ခေါင်းဆောင် အယ်ဒီတာနှင့် သူ့အတွက် ပန်းကုံးများ (ဆရာနှင့် သူ၏ပန်းပွင့်များသို့)
ခေါင်းဆောင် အယ်ဒီတာနှင့် သူ့အတွက် ပန်းကုံးများ (ဆရာနှင့် သူ၏ပန်းပွင့်များသို့) မောင်စိုးချိန် မေ ၁၇၊ ၂၀၁၄ ပေါ်သစ် စာရေးဆရာ သို့မဟုတ် အယ်ဒီတာ ဝင်းတင် သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် အမှန်တရားချစ်လွန်းသူ။ လူထုက သူ့ကိုချစ် ဦးထိပ်ပန်ဆင်လေးစားခဲ့ကြ အချစ်များစွာရရှိခဲ့သူ။ ရန်သူက သူ့ကိုသိပ်မုန်း ဆယ့်ကိုးနှစ်အတွင်း အကျဉ်းတိုက်မှာ သတ်ဖြတ်ခဲ့ တတိတိ ချေမှုန်းခဲ့။ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဖျက်သိမ်းရေးတိုင်ပွဲထဲမှာပဲ သူကျဆုံးသွားခဲ့ပေါ့။ သူ့ကို သင်္ဂြိုလ်တဲ့နေ့ သင်္ချိုင်းမြေမှာ သူ့ကို ဦးညွတ်ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြ ဝမ်နည်းခြင်း မျက်ရည်ပန်းကုံး ကြေကွဲ ရှိုက်သံ ပန်းကုံး နှမြောတသ ပန်းကုံး ပန်းပွင့်စစ်စစ် လွမ်းသူ့ပန်းခွေ ပန်းကုံး ပန်းကုံးတွေ…….. ပန်းကုံးတွေ လွမ်းမြမြ တမ်းတမဆုံး ဆို့နင့်စကားလုံး ပန်းကုံး တောင်ကုန်း...
ဆောင်းယွန်းလ – မေမေ ကျေနပ်မှာပါ
မေမေ ကျေနပ်မှာပါ ဆောင်းယွန်းလ မေ ၁၆၊ ၂၀၁၄ illustration Toni Demuro ဘယ်နေ့လဲလို့ မေးလာတဲ့ မေးခွန်းအထပ်ထပ်ပေါ်မှာ ညနက်နက်တွေကို အိပ်ဆေးသောက်ဖျောက်ထားခဲ့ရင်း ကိုယ့်ချဉ်ခြင်းကိုယ် အိပ်မက်ထဲမှာ အကျဉ်းချထားခဲ့မိပါတယ်.. ကုန်လွယ်ပြီး ရခဲတဲ့ ဘ၀ထဲက ရက်စွဲတွေကို ကိုယ်တိုင်ပဲ ခက်ခက်ခဲခဲ ကြိုးမိန့်ချခဲ့မိပါတယ်… အိမ်ကိုမြန်မြန်ပြန်ရောက်နိုင်မယ့် အဝေးပြေးလမ်းတွေ အရင်ကထက် ပိုပေါက်လာခဲ့ကြတယ်… အိမ်ကိုတော့ တခေါက်မှ ပြန်မရောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး… အသံတွေကို အမြန်နှုန်းနဲ့ပို့ပေးနိုင်မယ့် အဝေးပြောစံနစ်တွေ အရင်ကထက် ပိုသစ်လာခဲ့ကြတယ်… အိမ်ကိုတော့ တနှစ်မှ အသံတွေပြန်မပို့ဖြစ်ခဲ့ဘူး… ကိုယ်တိုင်ပြန်မရောက်ဖြစ်တဲ့ နှစ်တွေနဲ့ အသံတွေပြန်မပို့ဖြစ်တဲ့ ခေတ်တခုရဲ့ကြားမှာ မေတ္တာစစ်တဲ့ အချစ်တွေမခြားခဲ့သလို သံယောဇဉ်တွေလည်း မခြားခဲ့ပါဘူး မေမေ…။ No tags for this post....
ဆောင်းယွန်းလ – သန်းခေါင်ယံ မက်တဲ့ကဗျာ
သန်းခေါင်ယံ မက်တဲ့ကဗျာ ဆောင်းယွန်းလ မေ ၁၄၊ ၂၀၁၄ illustration by Toni Demuro အိပ်မက်တွေက အိပ်မက်ထဲမှာတောင် တ၀တ်တပျက် အိပ်မက်တွေနဲ့ အိပ်မက်ဟာ အိပ်မက်မဆန်ချင်တော့ဘူး… အရာရာဟာ အကြောင်းကြောင်းတွေကြောင့် ဘာမှ မထူးခြားတော့သလို ဘာမှလည်း မဆန်းပြားလှတော့ပါဘူး… လမ်းတွေက ကျဉ်းမြောင်းလွန်းနေတော့ ကိုယ့်ခြေရာဟောင်း ကိုယ်ပြန်ရှာဖို့ လွယ်ကူလိမ့်မယ်လို့ ထင်ခဲ့မိပါရဲ့…. တခါတခါမှာ ထင်တာတွေ ဖြစ်မလာတတ်ခဲ့သလို မကြာမကြာမှာ မထင်တာတွေလည်း ဖြစ်တတ်ခဲ့တယ်… ရင်လောက် မှန်းထားခဲ့သမျှ ဖ၀ါးအောက် ကျပျောက်သွားတဲ့အခါ ကံကြမ္မာဟာ ယိုးမယ်ဖွဲ့စရာအကောင်းဆုံး ကုထုံးတခုတဲ့ပဲလား….. ကိုယ်ပိုင်မေးခွန်းတွေကို ဖြေဆိုဖို့ ကိုယ်ပိုင်အဖြေတွေကို တွေးတောဖို့ ခက်ခဲလွန်းနေခဲ့တဲ့ အချိန်တွေမှာ ရောထွေးနေတဲ့ ဘ၀ကို စာမျက်နှာတချို့လောက် ချန်လှပ်ထားခဲ့ပြီး စာမျက်နှာတ၀တ်လောက် လှန်ဖတ်ခဲ့မိပါတယ်…....
မောင်စွမ်းရည် – မိခင်များနေ့ ပူဇော်သီကုံးသော ရှစ်လုံးဘွဲ့ကဗျာ
မိခင်များနေ့ ပူဇော်သီကုံးသော ရှစ်လုံးဘွဲ့ကဗျာ မောင်စွမ်းရည် မေ ၁၂၊ ၂၀၁၄ (၁) မာတာပီတ၊ အနန္တဂုဏ်ရည် မြင့်မိုရ်နှင့်နှိုင်း၊ ဂုဏ်လှိုင်းဝေစီ ငါးဖြာအနန္တ၊ ဗုဒ္ဓဂုဏ်ရည် ကြာမုံဖူး တင်ဦး အဉ္စလီ။ (၂) ကိုးလမက၊ ဆယ်လလွယ်လျှင် ပူစပ်ငန်းခါး၊ အစားဆင်ခြင် ထိုင်ထလာသွား၊ နေနား လေးပင် အာဝေဏိက၊ မိဒုက္ခ၊ များလှ အိုမိခင် (၃) သွေးနီရဲက၊ ချိုမြဖြူစင် မေတ္တာဖန်ဆင်း၊ သန့်ရှင်းဖွေးလွင် မွေးစရင်းသွေး၊ တိုက်ကျွေးမိခင် အနန္တ ကြီးစွ တို့ဂုဏ်အင်။ (၄) တားမြစ်မကောင်း၊ ကောင်းမြတ်ထူးချွန် ရင်းနှီးပေးထ၊ သင်ပြတတ်ပွန် ဖခင်လက်ဆွဲ၊ ယှဉ်တွဲလမ်းညွှန် မိဖ၀တ် မချွတ်မြတ်တာဝန် (၅) မိခင်များနေ့၊ ယနေ့ဦးတင် မိခင်ဂုဏ်ထူး၊ အထူးဆင်ခြင်...
စေပိုင်ထွဋ် (ပုသိမ်) – အိမ်ထဲမှာ ပိတ်နေသူများသို့
အိမ်ထဲမှာ ပိတ်နေသူများသို့ စေပိုင်ထွဋ် (ပုသိမ်) မေ ၁၀၊ ၂၀၁၄ အိမ်ထဲမှာနေပြီး ကျွန်တော်တို့က သိပ်အေးတယ် ညည်းတယ် အိမ်ယာမဲ့ဘ၀ လမ်းဘေးပေါ်မှာ ဘယ်လိုနေရှာမလဲ တွေးကြည့်ကြည့်လိုက်။ အိမ်ထဲမှာနေပြီး ရသာစုံမြည်းနေရတာတောင် ကျွန်တော်တို့လျှာက ချီး(ဂျီး)များလွန်း မလုံလောက်ဘူးလည်း ညည်းတွားချင်ရဲ့ စစ်ပွဲမှာ ဒုက္ခရောက် ငတ်ပြတ်နေသူတွေဘ၀ စာနာမိရဲ့လား တွေးအုံး။ အိမ်ထဲမှာနေပြီး ကျွန်တော်တို့က မြင်ကြားသမျှ ဘ၀မကျ စွတ်ဝေဖန် ကိုယ်တိုင်ရော ထိုင်ရာက ထဖြစ်လို့လား စဉ်စား။ အိမ်ထဲမှာနေပြီး ကျွန်တော်တို့က ကိုယ့်အတ္တကိုယ်ပဲ အရောင်စိုး လိပ်တွေလိုယက်လို့ လိုအပ်သူအတွက် ထိထိရောက်ရောက် ကူညီဖြစ်ရဲ့လား မညာဘဲ ဖြေကြည့်။ ကျွန်တော်တို့က အိမ်ထဲမှာနေပြီး ဒီလိုဒီလို ဒီနည်းနဲ့ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ် အလင်းပိတ်မိနေတာ များတယ်...
အောင်ကိုကိုလတ် (တမူး) – လက်ထိပ်ထဲက လက်​နှစ်​ဖက်​
လက်ထိပ်ထဲက လက်​နှစ်​ဖက်​ အောင်ကိုကိုလတ် (တမူး) မေ ၁၀၊ ၂၀၁၄ ​​​လက်​တစ်​ဖက်​က ပစ်​မချရလို့​ပြော​တော့ လက်​တစ်​ဖက်​က ကွဲတတ်​သည်​ လို့ပြန်​​ဖြေတယ် လက်​တစ်​ဖက်​က မီး​ဘေး​ရှောင်​လို့​ပြော​တော့ လက်​တစ်​ဖက်​က မ​လောင်​ခင်​တား လို့ပြန်​​ဖြေတယ်​ လက်​တစ်​ဖက်​က စိတ်​ရှည်​သည်းခံလို့​ပြော​တော့ လက်​တစ်​ဖက်​က လမ်း​ကြောင်းမှန်​ လို့ပြန်​​ဖြေတယ်​ လက်​တစ်​ဖက်​က ဗလာမပါကံစမ်းမဲလို့​ပြော​တော့ လက်​တစ်​ဖက်​က ​ကျေးဇူးတင်​ပါသည်​ လို့ပြန်​​ဖြေတယ်​​​ လက်​တစ်​ဖက်​က နိုင်​ငံ​ရေးလို့​ပြော​တော့ လက်​တစ်​ဖက်​က ​အကျဉ်းထောင်​ လို့ပြန်​​ဖြေတယ်​ လက်​တစ်​ဖက်​က စီးပွား​ရေးလို့​ပြော​တော့ လက်​တစ်​ဖက်​က ခရိုနီလို့ပြန်​​ဖြေတယ်​ လက်​တစ်​ဖက်​က ငြိမ်းချမ်း​ရေး လို့​ပြော​တော့ လက်​တစ်​ဖက်​က ဒုက္ခသည်​စခန်း လို့ပြန်​​ဖြေတယ်​ လက်​တစ်​ဖက်​က ဒီမိုက​ရေစီလို့​ပြော​တော့ လက်​တစ်​ဖက်​က တိုက်​ပုံအင်္ကျီ လို့ပြန်​​ဖြေတယ်​ လက်​တစ်​ဖက်​က ၂၀၁၅ လို့​ပြော​တော့ လက်​တစ်​ဖက်​က လက်​က​လေးကိုလှုပ်​ယမ်းပြလိုက်​တယ်​ `မင်း​ရောငါ​ရော...
အချစ်များနဲ့ သစ်စေသတည်း ကျော်ဟုန်း မေ ၈၊ ၂၀၁၄ ဆုံးဖို့ အတွက် စခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ဆုံး ပြန် စတယ်။ အဆုံးဟာ ဟောင်း အစဟာ သစ်လွင်။ (ဒီလို ယူဆ) ဒီလိုနဲ့အစနဲ့ အဆုံး အဆုံးနဲ့ အစ ဆပွား ချဲ့ ကားမ ချာလည် ပတ်လည်ရင်း …။ ကမ္ဘာဟာ သစ်ခဲ့တယ်။ ယဉ်ကျေးမှုတွေ သစ်ခဲ့တယ် (မင်းလဲ သစ်တော့….) ဒါပေမဲ့ … သစ်ချင်သူမှန်သမျှ အချစ်တော့ လိုမယ်။ ဒီအချစ်ကို ရေ မထိုးနဲ့လေ မထိုးနဲ့ ။ ။ No tags for this...
မောင်စိုးချိန် – မြေနဲ့အတူ အဓွန့်ရှည်မည့်သူ
မြေနဲ့အတူ အဓွန့်ရှည်မည့်သူ (နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် အယ်ဒီတာစာရေးဆရာ ဦးဝင်းတင်သို့ ဦးညွတ်ကဗျာ) မောင်စိုးချိန် မေ ၅၊ ၂၀၁၄ တောရိုင်းဆင် ဝက်ဝံ ကျားများ ကျားသစ်များ မိကျောင်း တောခွေးအုပ် မြေခွေးအုပ် သိန်းစွန်ငှက် ငါးမန်းအုပ် သားကောင်သတ်ဖြတ်ဖို့ ဖမ်းချုပ်ဝါးမြိုဖို့ နိုင်ရာစားလုပ်ဖို့ လွှသွားအစွယ် ပရိယာယ်အမျိုးမျိုး အဆိပ် မေးရိုး ကြွက်သား ခြေသည်း လက်သည်း ချွန်မြ နုတ်သီး အားအင်ကြီးမား ကြီးထွား။ မွေးထား တသသ။ စစ်အာဏာရှင် တောရိုင်း ဒီအတိုင်းပါပဲ စစ်တပ် ၊ ပုလိပ်တပ် တရားရုံး စစ်ခုံရုံး ထောင် အချုပ်ခန်း အမှောင်ခန်း စစ်ခွေးတိုက်၊ ကြိုးတိုက် ရှေ့နေ တရားသူကြီး စစ်ထောက်လှမ်းရေး၊ စစ်ကြောရေး ပြည်တဲရေး...
မင်းညွှန့်လှိုင် – တ က ယ့် အ ဖြ စ် အ ပျ က်
တ က ယ့် အ ဖြ စ် အ ပျ က် မင်းညွှန့်လှိုင် မေ ၄၊ ၂၀၁၄ ဒီလိုလေ လီယာခေါ်တာလီကို ရော်ဟီးမူလာက အကြွေးဆပ်ဖို့ရှိတယ် အဲဒီနေ့က ရော်ဟီးမူလာနဲ့ လီယာခေါ်တာလီတို့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာတွေ့ပြီး စကားများကြရောဆိုပါတော့ လီယာခေါ်တာလီကို ရော်ဟီးမူလာကလက်သီးနဲ့ထိုးတယ် အဲဒီအချိန်မှာ ဆိုင်ထဲရောက်နေတဲ့ပုလိပ်ကြီးက ဖျန်ဖြေပေးရှာပါတယ် ဒါနဲ့ ရော်ဟီးမူလာက ဆိုင်အပြင်ထွက်သွားတယ် မပြီးသေးဘူးဗျာ ဆိုင်အပြင်လမ်းပေါ်ရောက်မှ ရော်ဟီးမူလာက ဆဲဆိုပြန်တယ် လီယာခေါ်တာလီကလည်း ဆိုင်ထဲကပြန်ဆဲပေါ့ ခဏနေတော့ လီယာခေါ်တာလီပါ ဆိုင်အပြင်ထွက်သွား လမ်းပေါ်မှာ ရန်ထပ်ဖြစ်ကြပြန်ရော ရော်ဟီးမူလာ ထိုးကြိတ်လို့ လီယာခေါ်တာလီ ဒဏ်ရာရ အဲဒါနဲ့ မဟုတ်ဘူး မဟုတ်ဘူး ဒါဟာ နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းမဟုတ်ဘူး ပြည်တွင်းတနေရာမှာဖြစ်နေတာ မြန်မာပြည်ကြီးမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာပါဗျာ...
သန်းဌေးမောင် – မေမေကဗျာ
မေမေကဗျာ သန်းဌေးမောင်၊ မေ ၃၊ ၂၀၁၄ မေမေက ကဗျာတပုဒ်ပါမေမေ မေမေ့အကြောင်းအမြဲတွေးနေဖြစ်ခဲပေ့မယ့် ဘယ်တုန်းကမှချမရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး မေမေက အမေ ဆိုတဲ့ကဗျာပေါ့ ခုထိမေမေ့ကို ကျနော့ရင်ခွင်ထဲမှာ ပွေ့ထားတုန်း။ ခုထိမေမေ့လက်ချောင်းလေးတွေကို ကျနော်ဆုပ်နယ်ပေးနေမိတုန်း ။ ခုထိမေမေေ့ခြသလုံးတွေကို နှိပ်နယ်ပေးနေမိတုန်း။ ခုထိမေမေ့ပါးလေးကို နမ်းနေမိတုန်း။ မေမေ့အပြုံးလေးတွေကို ပြန်လိုချင်လိုက်တာ မေမေရယ် အမေဆိုတဲ့ ကဗျာဟာ မေမေပေါ့ အမေဆိုတဲ့ ကဗျာက မေမေဆိုရင် အဲဒီကဗျာရှည်ကို ကျနော်ရွတ်ဆိုမယ် မေမေဟာကျနော့အတွက်ကြီးမြတ်သော ကဗျာတပုဒ်ပါ ကျနော့ ညတွေမှာ မေမေက လမင်းစန္ဒာ ကျနော့ နံနက်ခင်းမှာ မေမေကဝင်းပနေခြည် ကျနော့ ကောင်းကင်မှာ မေမေက အပြာရောင် ကျနော့ မြေပြင်မှာ မေမေကအစိမ်းရောင် ကျနော့ မိုးရွာပြီးစတွေမှာ မေမေကမိုးသက်တန့် ကျနော့...
Page 181 of 235«1...179180181182183...235»
ဆောင်းယွန်းလ - "အရာရာဟာနောက်ကျခဲ့တယ် ဂျူလီယာ"
သုတလင်း (ဆင်ပေါင်ဝဲ) ● လူဖြစ်ရကျိုးနပ်ကြသူတွေအကြောင်း
ဆောင်းလူ - မုဆိုးရာသီ